ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်(၁၂)ရဲ့ အကောင်းဆုံးအသင်းမှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်နေလဲ
13 Nov 2018 . 3:30 PM
ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲဟာ လက်ရှိမှာ ပွဲစဉ်(၁၂)အထိပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။ မန်စီးတီး ၊ လီဗာပူးလ် ၊ ချယ်လ်ဆီးအသင်းတွေဟာ ခုချိန်ထိရှုံးပွဲမရှိသေးတာကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၁၂)ပွဲအပြီးမှာ အသင်း(၃)သင်း ရှုံးပွဲမရှိတာဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်(၁၂)ရဲ့ အကောင်းဆုံးအသင်းမှာတော့ နာမည်ကျော်ကစားသမား အများစုပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကစားသမားတွေကတော့ လာပေါ့တ် Laporte ၊ ဒေးဗစ်ဆေးဗားလ် David Silva ၊ ရမ်ဆေး Ramsey ၊ မာစီယဲလ် Martial ၊ အဂွဲရိုး Aguero ၊ ဆာလာ Salah တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၁) လာပေါ့တ် Laporte
မန်စီးတီးနောက်ခံလူ လာပေါ့တ် Laporte ဟာ မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲစဉ်မှာ မန်ယူအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဒီစာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့တာပါ။
(၂) ဒေးဗစ်ဆေးဗားလ် David Silva
ဒေးဗစ်ဆေးဗားလ် David Silva ဟာလည်း မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲစဉ်မှာ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေနဲ့ အသင်းကို ဦးဆောင်ကစားခဲ့သလို ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
(၃) ရမ်ဆေး Ramsey
အာဆင်နယ် ( ၁ – ၁ ) ၀ုလ်ဗ်ပွဲစဉ်မှာ ရမ်ဆေး Ramsey ဟာ အာဆင်နယ်အသင်း ရှုံးပွဲမကြုံဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ချေပဂိုးကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(၄) မာစီယဲလ် Martial
မန်ချက်စတာဒါဘီ ပွဲစဉ်မှာ မန်ယူအသင်းဟာ မာစီယဲလ် Martial ရဲ့ ဘယ်ခြမ်းကပဲ အဓိကထိုးဖောက် တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေတဲ့ အသင်းကို မာစီယဲလ်ဟာ ဦးဆောင်ကစားခဲ့ပြီး အဲဒီပွဲမှာ အသင်းအတွက် ချေပဂိုးတစ်ဂိုးလည်း သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီသွင်းဂိုးကြောင့် မာစီယဲလ်ဟာ ပြင်သစ်ကစားသမားတွေထဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်(၅)ပွဲဆက် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ (၅)ယောက်မြောက် ကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မန်ချက်စတာဒါဘီ ပွဲစဉ်မှာ အဂွဲရိုး Aguero ဟာ မန်ယူနောက်ခံလူတွေကို ဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း လှလှပပ သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(၆) ဆာလာ Salah
လီဗာပူးလ်က ဖူလ်ဟမ်ကို ( ၂ – ၀ )နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ဖူလ်ဟမ်အသင်းရဲ့ တုံပြန်အားကြောင့် ဂိုးရဖို့ ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆာလာ အသင်းအတွက် အဖွင့်ဂိုးစသွင်းလိုက်ချိန်မှာတော့ ပွဲဟာ လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်(၁၂)ရဲ့ အကောင်းဆုံးအသင်း
1. Joe Hart ( Burnley )
2. Holebas ( Watford )
3. Laporte ( Man City )
4. Foyth ( Spur )
5. Alexander-Arnold ( Liverpool )
6. David Silva ( Man City )
7. Ramsey ( Arsenal )
8. Hogg ( Huddersfield )
9. Martial ( ManU )
10. Aguero ( Man City )
11. Salah ( Liverpool )
Photo: Premier League , ESPN , FOX Sports Asia , Pinterest
ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ(၁၂)ရဲ့ အကောငျးဆုံးအသငျးမှာ ဘယျသူတှပေါဝငျနလေဲ
ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲဟာ လကျရှိမှာ ပှဲစဉျ(၁၂)အထိပွီးဆုံးခဲ့ပါပွီ။ မနျစီးတီး ၊ လီဗာပူးလျ ၊ ခယျြလျဆီးအသငျးတှဟော ခုခြိနျထိရှုံးပှဲမရှိသေးတာကွောငျ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၁၂)ပှဲအပွီးမှာ အသငျး(၃)သငျး ရှုံးပှဲမရှိတာဟာ ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျလညျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ(၁၂)ရဲ့ အကောငျးဆုံးအသငျးမှာတော့ နာမညျကြျောကစားသမား အမြားစုပါဝငျခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီကစားသမားတှကေတော့ လာပေါ့တျ Laporte ၊ ဒေးဗဈဆေးဗားလျ David Silva ၊ ရမျဆေး Ramsey ၊ မာစီယဲလျ Martial ၊ အဂှဲရိုး Aguero ၊ ဆာလာ Salah တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
(၁) လာပေါ့တျ Laporte
မနျစီးတီးနောကျခံလူ လာပေါ့တျ Laporte ဟာ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲစဉျမှာ မနျယူအသငျးရဲ့ တိုကျစဈကို အကောငျးဆုံးထိနျးခြုပျကစားနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ဒီစာရငျးမှာပါဝငျခဲ့တာပါ။
(၂) ဒေးဗဈဆေးဗားလျ David Silva
ဒေးဗဈဆေးဗားလျ David Silva ဟာလညျး မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲစဉျမှာ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးတှနေဲ့ အသငျးကို ဦးဆောငျကစားခဲ့သလို ကိုယျတိုငျလညျး တဈဂိုးသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။
(၃) ရမျဆေး Ramsey
အာဆငျနယျ ( ၁ – ၁ ) ဝုလျဗျပှဲစဉျမှာ ရမျဆေး Ramsey ဟာ အာဆငျနယျအသငျး ရှုံးပှဲမကွုံဖို့အတှကျ အရေးပါတဲ့ခပြေဂိုးကို ဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
(၄) မာစီယဲလျ Martial
မနျခကျြစတာဒါဘီ ပှဲစဉျမှာ မနျယူအသငျးဟာ မာစီယဲလျ Martial ရဲ့ ဘယျခွမျးကပဲ အဓိကထိုးဖောကျ တိုကျစဈဆငျမှုတှပွေုလုပျခဲ့ပါတယျ။ အခကျအခဲတှနေဲ့ ကွုံတှနေ့တေဲ့ အသငျးကို မာစီယဲလျဟာ ဦးဆောငျကစားခဲ့ပွီး အဲဒီပှဲမှာ အသငျးအတှကျ ခပြေဂိုးတဈဂိုးလညျး သှငျးယူပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒီသှငျးဂိုးကွောငျ့ မာစီယဲလျဟာ ပွငျသဈကစားသမားတှထေဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂျ(၅)ပှဲဆကျ ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့တဲ့ (၅)ယောကျမွောကျ ကစားသမားဖွဈခဲ့ပါတယျ။
မနျခကျြစတာဒါဘီ ပှဲစဉျမှာ အဂှဲရိုး Aguero ဟာ မနျယူနောကျခံလူတှကေို ဖိအားပေးကစားနိုငျခဲ့ပွီး ကိုယျတိုငျလညျး လှလှပပ သှငျးဂိုးတဈဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
လီဗာပူးလျက ဖူလျဟမျကို ( ၂ – ၀ )နဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ ပှဲမှာ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ ဖူလျဟမျအသငျးရဲ့ တုံပွနျအားကွောငျ့ ဂိုးရဖို့ ခကျခဲခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆာလာ အသငျးအတှကျ အဖှငျ့ဂိုးစသှငျးလိုကျခြိနျမှာတော့ ပှဲဟာ လီဗာပူးလျအသငျးအတှကျပဲဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ(၁၂)ရဲ့ အကောငျးဆုံးအသငျး